Waxaa jira video in aad leedahay on your computer oo aad rabto in aad qabto ku saabsan qalabka la qaadi karo sida iPhone. Si aad u leedahay ee aad taleefan aad u baahan tahay si ay u wareejiso isticmaalaya app ah, taas oo amaan iyo degdeg ah. Oo weliba waxaad u baahan tahay hab buuxda in sii hayn doona tayada videos. In this article waxaan bilaabayaa adigoo u muujinaya sida ay u gudbiyaan videos in aad Lugood computer iyadoo la isticmaalayo
Part1: Sida loo wareejiyo videos ka PC si iPhone isticmaalaya Lugood
Part2: Sida loo wareejiyo videos si iPhone oo aan laga badinin videos iphone
Qaybta 1aad: Sida loo wareejiyo videos ka PC si iPhone isticmaalaya Lugood
Lugood waa codsi ah oo kuu ogolaanaya in aad maamuli maktabadda warbaahinta. Waxa kale oo ay kuu ogolaanayaa inaad warbaahinta ka qalab qaadan karo sida iPhone, iPad, iPod wareejiyo si aad Xisaabiyaan Personal iyo qeybsanaan. Hubi in aad computer ayaa Lugood hor qabashada shaqo kasta. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka ku saabsan sida ay u gudbiyaan videos ka computer si iPhone.
Tallaabada 1 Link Your iPhone in PC
Your iPhone waa in lagugu xiro your computer. Waxaa Connect cable in iska leh aad iPhone ah. Sida aad u fuushaan Lugood computer aad degna laftiisa furi doonaa. Haddii ay diido in ay sameeyaan si ay u tagaan Codsiyada> Lugood oo la furo.
Tallaabada 2 Dooro videos on Lugood in lagu wareejiyo
On aad suuqa kala Lugood tagaan si ay ugu weyn menu oo guji File. On hoos dhibic in booda click on dar Faylal ay ku Maktabadda. Waxaa soo hagaajin doonaa si aad u computer halkaas oo aad ka dooran doonaa videos uu ugu dhaqaaqi lahaa iPhone iyo dar Library.
Tallaabada 3 iibsiga videos loo doortay in ay iPhone
Haddaba tag in Lugood iyo riix aad ku button iPhone. From waxaa u hagaagsan aad videos oo ugu dambeyntii guji Codso hoose ee suuqa kala. Videos ayaa lagu wareejin doonaa iPhone ka kaaftoomi badan aan.
Waxa aad u baahan tahay inaad ogaato oo ku saabsan codsiga Lugood waa in ay inta badan ku badali doonaa files video hadda marka aad u waafajinta. Tani inta badan waa kiiska marka aad isticmaasho codsiga hidi si ay u gudbiyaan videos qalabka mobile aad sida iPhone. In files waaweyn la qaraarada sare ay xal waa la dhimi doonaa ugu danbeyn laga badiyay tayada videos.
Mararka aad u ogaato in dhamaan videos ma lagu wareejiyay aad iPhone oo isticmaalaya daaqadaha. Ma laga yaabaa in ay ku seegay in aad soo dooratay? Taasi run ma aha. Sababta ka dambeysa arrintan waa in Lugood ma taageeraan oo dhan qaabab video. Lugood iyo kombuyuutarrada gacanta taageeraan MOV files, M4V iyo qaab videos MP4 in sidoo kale waxaa la ciyaari karaan QuickTime. Hubi in aad videos in aad rabto in lagu wareejiyo waa qaab this. Tani waxay keeni doontaa in la iibiyo si guul leh videos.
Si looga fogaado khatarta ah in laga badiyay videos jira on iPhone ama video ah oo uu ku guul darreystay in loo soo wareejiyo aad iPhone. Waxaan ku talinaynaa in aad isticmaasho Wondershare app gaar loo yaqaan Wondershare TunesGo Retro.
Qeybta 2: Sidee si ay u gudbiyaan videos si iPhone oo aan laga badinin videos iphone
App taana labada daaqadaha iyo dadka isticmaala Mac aad leedahay oo keliya in ay ka soo dejisan Wondershare website. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa qiyaastii $ 40. App Tani waa qiimo iibsigu tan iyo markii ay ogolaanaysaa maktabadda warbaahinta in uu yahay sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow ka macruufka qalab si aad u computer aad kuu soo gudbin. Waxaa si degdeg ah oo ammaan ah. Sida aad ku wareejin file waxa ay noqon doontaa si loogu badalo faylka leheyn in file socon on your iPhone, iPad iPod ama awood. In xaalad kaa lumay heeso qiimo aad, ama videos app this awood u yeelan doonaan inay u dhoofiyaan wax kuwan oo dhan ku Lugood in qalab aad. Maxaa kale oo noocee ah software aad wali raadinayaan haddii aan Wondershare TunesGo Retro? Dufcaddii A ee file waxaa loo wareejin doonaa dhawr daqiiqadood gudahood. Ma aan la yaab leh.
Iyada oo aan wax ugu buuqaysaan oo dheeraad ah i daa aan idin tusin sida loo isticmaalo codsigan si ay u gudbiyaan videos.
Tallaabada 1 Download app oo ku abuurtaan si aad Computer
Waxaad xitaa kala soo bixi kartaa maxkamadda oo lacag la'aan ah si aad u aragto sida ay u shaqayso. Hubi in si sax ah oo aad ku rakibi on your computer.
Tallaabada 2 Connect mobile si aad u computer ah
Waxaad u baahan tahay si ay u xiri computer la qalab mobile ogolaanaysaa dhihi iPhone. Waxaa arbushin doonaa oo ku Wondershare TunesGo Retro Window dhinaca bidix ee suuqa.
Tallaabada 3 Dooro Videos in loo wareejiyo
Hadda riix Movies, ka dibna dooro videos aad rabto in lagu wareejiyo si aad u computer. Markaas guji Add ku xiga Folder Add. Tani ha aad ka heli videos ka your computer in lagu daro in iPhone.
Tallaabada 4 Bedelka Videos in ay iPhone
Ka dib markii la aqoonsado videos in lagu daro in aad iPhone, aad haatan riixi kartaa Open . Videos ayaa si deg deg ah loo wareejin doonaa iPhone.
Ma jirto baahi loo qabo in wada tago Internetka raadinaya app ah si ay u gudbiyaan aad videos in aad iPad, iPod ama iPhone. Just download TunesGo Wondershare ka Retro oo wuxuu ku raaxaysan qaababka ay heer sare ah. Waa maskaxda waxay afuufayeen app ah waa in aad leedahay.
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan videos ka pc si iPhone for free